dimanche, 22 août 2021 18:29
Faritra atsinanana : Fanarenana ny lalana mampitohy ny RN2 amin'i Manambato
Tonga nanamarika ny fanombohan'ny fanarenana ny lalana mampitohy ny lalam-pirenena faha 2 amin'i Manambato, mirefy 7km ny filoha Andry Rajoelina ny faran'ny herinandro teo. Nanara-dia azy tamin'izany ny Governora Faritra atsinanana RAFIDISON Richard Théodore. Nampiasaina tamin'izao fanarenana sy fikojakojana ny lalana izao ireo fitaovana vaventy natolotra ny Faritra. Nomarihana manokana nandritra izao fanombohana asa izao ny fanolorana ny marika fahavitana fiofanana ho an'ireo mpamily sy mpikojakoja ny fitaovana avy amin'ny orinasa Henri Fraise izay miantoka ireo fitaovana ireo. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 22 août 2021 17:14
Faritra fialan-tsasatra voaaro : Hampihena ny tahan’ny lozam-pifamoizana amin’ny lalam-pirenena
Nosafidian'ny Fitondram-panjakana hipetrahan’ ny « Faritra fialan-tsasatra voaaro » na « Aire de Service, de Sécurité et de Repos » voalohany eto Madagasikara ny ao Sahamamy Brickaville, anatin’ny lalam-pirenena faharoa, noho ny fahabetsahan’ny tahan’ny entana na ny olona mihazo ny faritra Atsinanana. Natao hamaly ny filan’ny mpitatitra sy ireo mpampiasa ny lalam-pirenena ity fotodrafitrasa ity, ary indrindra koa natao hialana sasatra sy hampiala-voly ireo mpihazo ny lalam-pirenena ihany koa. Ny fametrahana ny « Aire de Service, de Sécurité et de Repos » kosa dia mba hahafahan’ireo olona rehetra mampiasa ny lalam-pirenena maka aina, miala sasatra, misakafo ary mikojakoja ny fiara. Heverina ihany koa fa hampihena ny tahan’ny lozam-pifamoizana amin’ny lalam-pirenena. Ity fotodrafitrasa lehibe manarapenitra mitoetra amina velaran-tany 1ha ity dia ahitana toeram-pisakafoanana maro, toeram-pidiovana, trano heva maro fivarotana asatanana sy voandalana ary ireo vokatra vokarin’ny faritra manodidina, ary toerana fikojakojana fiara.
vendredi, 13 août 2021 18:44
Hopitaly Miaramila Soavinandriana : Mankalaza ny faha 130 taona nijoroany
Mankalaza ny faha 130 taona nijoroany ny Hopitaly Miaramila eo Soavinandriana, androany 13 Aogositra 2021. Niorina tamin'ny fotoana nanjakan'ny mpanjakavavy Ranavalona III ity fotodrafitrasa ity. Nisy ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana natao tao amin'ny Fiangonana Loterana ao amin'ny hopitaly nentina nanamarihana izany, ho fisaorana an'Andriamanitra, ary hanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny tsingerintaona. Tonga niombom-bavaka sy nanotrona ny fotoam-pivavahana ireo tompon'andraikitra maro eo anivon'ny Ministera sy ireo mpitsabo eo anivon'ny hopitaly.
jeudi, 12 août 2021 19:35
Fandriampahalemana : Nankasitrahana ireo Zandary mendrika sy nanao ny asany ankitsimpo ka nahazoana vokatra tsara
Nahazo medaly sy laharam-boninahitra manokana ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra eo anivon'ny Zandarimaria nandritra ny lanonana izay notarihan'ny Filoham-pirenena sady filoha faratampon'ny Foloalindahy Andry Rajoelina, androany 12 aogositra 2021, teny amin'ny toby CFS Ivato. Natao indrindra ho famporisihana sy fanohanana ireo Zandary mendrika sy manao ny asany ankitsimpo ka nahazoana vokatra tsara eo amin’ny lafin’ny fandriampahalemana, indrindra eo amin'ny ady amin'ny asan-dahalo izao hetsika izao. Manamboninahitra ary manamboninahitra lefitra miisa 19 mirahalahy no nahazo medaly noho ny ezaka sy vokatra tsara nomen’izy ireo teo am-panatanterahina ny asany. Anisan'izany ny hetsika manokana fitadiavana sy fisamborana an'i Del Kely izay jiolahy rain-dahany amin'ny fanaovana takalon'aina sy Jerison sy ireo mpiray tsikombakomba aminy izay dahalo mpangalatra omby.
Sary : Governoran'ny Faritra Androy
Beloha Androy : Nahazo tohana ara-pitaovana ireo mpanjono hamokarany bebe kokoa
Isan'ny seha-pihariana heverina ho hirika sy fanoitry ny fampandrosoana aty amin'ny Faritra Androy ny Jono, ary manana morontsiraka 250km, manamorona Distrika telo dia Ambovombe, Beloha ary Tsihombe, izay tsy mbola voatrandraka araka ny tokony izy. Nandray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny FDA (Fonds du Développement agricole) fa omena tosika ara-pitaovana sy tohana ara-teknika manokana ireo fikambanan'ny mpanjono hamokarana be be kokoa hampiaingana ny toekaren'ny Faritra sy hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ka tao amin'ny Fokontany Lavanono, Distrikan'i Beloha no nisitraka izany. Tonga nanolotra izany taty an-toerana ny Governoran'ny Faritra Androy, ny Talem-paritry ny fambolena, fiompiana ary ny Jono ary ny Talem-paritry ny FDA Androy, ka fitaovana ho entina miandriaka toy ny harato, lakana, akanjo hoentina amin'ny aro-loza,....no nomena tamin'izany. Nankasitraka ary nanome toky ireo mpanjono, fa hiasa tsara, ary hiezaka ho matianina. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 12 août 2021 08:42
Vono olona : Novelesiny ho faty tamin'ny maritoa ramatoa vadiny dia nitsoaka izy
Nihevitra ny tsy ho hita intsony ilay lehilahy rehefa avy namono ny vadiny. Voasambotra tao Antsirabe Vakinankaratra anefa izy rehefa nitsoaka avy any Talata Volonondry Antananarivo ny 08 Aogositra 2021. Vely maritoa in-telo teo amin'ny lohany, no namonoany ity vadiny ity araka ny fiaiken-keloka nataony, satria nolazainy fa tratrany mampirafy matetika ravehivavy. Nohidiany tao an-trano ny razana ary lasa nitsoaka tany Antsirabe izy. Olona tsara sitrapo no nahita azy teo an-tsena Sabotsy ka niantso ny komandin'ny tobim-paritry ny zandarimaria Antsirabe.
mardi, 10 août 2021 21:14
Sary : Governora Faritra Sofia
Bakalorea : Nandiso ny resaka niely fa misy laza adina miparitaka ny Governoran’ny Faritra Sofia
Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana Bakalorea ao amin'ny Faritra Sofia. Tsy misy mipika fa voaaro tanteraka ny laza adina. Manoloana ny resaka miely fa misy laza adina miparitaka ao amin'ny Distrikan'i Boriziny dia nidina tao an-toerana ny Governoran'ny Faritra Sofia, ny Jeneraly Lylyson René de Rolland nijery ny zava-misy marina. Fantatra nandritra izany fa fikàsana hanakorontana sy hampisavorovoro ireo mpanao fanadinana no heverina nahatonga ny olona nanaparitaka iny tsaho iny ka miantso ny rehetra ho tony ny Governoran'ny Faritra Sofia, ary mirary filaminana sy fahombiazana hoan'ireo mpiadina, ary indrindra ny hahavitana ny fanadinana am-pilaminana. “Aoka tsy ampidirana resaka politika ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana mba ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana maharitra » hoy hatrany ny Jeneraly Lylyson. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 04 août 2021 19:47
Masindrano - Mananjary : Trano aman-jatony kila hotohoton'ny afo
Nitrangana haintrano goavana tao Masindrano, tanana amoron-dranomasina ao amin'ny Kaominina ambonivohitra Mananjary. Trano an-jatony no may. Tsy fantatra mazava hatreto izay niandohan'ny afo. Nalaky niitatra ny afo noho ny fitsokan'ny rivo-dranomasina. Fianakaviana maro no tsy manan-kialofana sy rava fananana. Tsy nisy ny aina nafoy.
mercredi, 04 août 2021 19:38
Analavory Itasy : Tafaverina amin’ny tompony ireo omby nangalarin’ny dahalo
Notafihin’ny dahalo valo lahy tao Mahatsinjo, Fokontany Kianjasoa, Kaominina Analavory, Faritra Itasy ny alin’ny 1 aogositra 2021 teo. Lasan’izy ireo ny omby miisa enina tao an-tanàna, izay fananana ankohonana iray. Norarafan’ireo dahalo tora-bato ny tranon’ireto farany nandritra ny fanafihana mba hampihorohoroana ny tompon’omby. Roso tamin’ny fanarahan-dia niaraka amin’ny Fokonolona ny zandary avy ao amin’ny « Poste Fixe” Marovoalavo vao nahazo fampandrenesana. Nambenana ny Kizo tao Ankijandava sy tao Anteva. Ny 02 aogositra 2021 vao maraim-be no votsotra teny amin’ny dahalo, ary tratra tao avaratry ny tanànan’Ankijandava, Fokontany Ambohimandroso, Kaominina Alatsinainikely ireo omby. Mbola karohiny ireo dahalo. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 04 août 2021 16:49
Marotsiraka - Amboasary Atsimo : Nisy nanodinkodina ny fanampiana avy amin’ny PAM
Nitrangana savorovoro ny fizarana fanampiana izay saika hotontosain'ny avy ao amin'ny ONG PAM sy solotenan'ny Kaominina Marotsiraka, Distrika Amboasary Atsimo, Faritra Anosy ny 02 Aogositra 2021. Nialoha ny hanatotosana ny fizarana dia nilaza tamin’ireo mpisitraka ny mpizara fa efatra gony ny anjaran' ny olona folo. Tsy nanaiky ireo mpisitraka fa enina gony an'olona folo no nahazatra azy ireo hatrizay. Nanazava ireo mpizara fa 1 100 gony no hozaraina amin'ity fa tsy 1 900 gony toy ny teo aloha, ary anatin' ny taratasy nandraisan'ny Kaominina azy io ny 1 100 gony io. Tsy mbola nanaiky ny mpisitraka fa milaza izy ireo fa misy mahita vary PAM amin’ny gony ao amin'ny trano izay ipetrahan'ny miaramila ao Marotsiraka.